အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် | ရိုးရိုးအမြောက် လက်မှုပညာ On
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ, ကတ်ထူပြားလက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့တွေ့မယ် ဒီ cannon လုပ်နည်းက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပင်လယ်ဓားပြများအကြောင်း အမျိုးမျိုးသော ဇာတ်လမ်းများကို ကစားရန်နှင့် တီထွင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် အဖေများနေ့ နီးလာလို့ လှူဖို့လည်း သုံးနိုင်တယ်။
1 ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြောက်များ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြောက်များ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းများ
အိမ်သာသုံးစက္ကူကတ်ထူပြား ၁ လိပ်
1 Cardboard bovine (များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ချည်မျှင် သို့မဟုတ် ကြိုးများကို ဆံထုံးပြုလုပ်ထားသော တိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည်) မင်းမှာ ဒီအကောင်တွေမရှိရင် လုပ်လို့ရတယ်။ ကတ်ထူအိမ်သာသုံးစက္ကူအလိပ်တစ်ဝက်နှင့် ကတ်ထူပြားအဝိုင်းနှစ်ခုကို တစ်ဖက်စီတွင် ကပ်ထားသည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက စက္ကူအညစ်အကြေးမှန်သမျှကို ရှင်းပစ်ပါ။ ၎င်းသည် ကတ်ထူပြားပေါ်တွင် ကျန်ရှိနေနိုင်ပြီး အရေပြားပေါ်တွင် ကော်ခြေရာများ ရှိနေပါက၊
အဲဒါပြီးရင် ငါတို့သွားမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြောက်အတွက် မည်သည့်အရောင်ကို ရွေးချယ်ပါ။ နက်မှောင်သောအရောင်အချို့ကို အကြံပြုထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် သင်သည် အလှဆင်အသေးစိတ်အချို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် မှောင်လွန်းသည်မဟုတ်ပေ။ ငါတို့လိုချင်ရင် ငါတို့အမြောက်ရဲ့ဘီးတွေဖြစ်မယ့် အမဲသားကို ဆေးသုတ်နိုင်တယ်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့သည် ကတ်ထူပြား၏အရောင်နှင့် တူညီသောအရောင်ဖြစ်ပါက ၎င်းတို့ကို ဆေးခြယ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ကတ်ထူပြွန်မခြောက်ခင်အထိ စောင့်ပါမယ်။ အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုအလှဆင်ပါ။ ပိုမှောင်သော အမှတ်အသားဖြင့် ဥပမာအားဖြင့် အဆုံးတစ်ခုစီတွင် မျဉ်းများ သို့မဟုတ် အစက်များ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အချိန်တန်ပါပြီ။ အမြောက်ကိုစီးပါ။. အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆုံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီမှာ ဆီလီကွန်တစ်စက်ကို ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် ပိုမိုရွေ့လျားနိုင်စေပြီး အမြောက်များကို တစ်ကြိမ်စီတွင် နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ပစ်နိုင်သောကြောင့် အပိုင်းများကို မချိတ်ပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆင်သင့်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကစားရန် သို့မဟုတ် ပေးချေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြောက်များ အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်နှင့် ဗူးတစ်လုံး
လွယ်ကူသော origami လက်မှုပညာ 20
မွေးကင်းစကလေးငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏မိဘများကို ပေးရန်အတွက် တောင်း သို့မဟုတ် အနှီးကိတ်မုန့်